Uyifaka njani i-mp3s yakho ngevolumu efanayo kwaye uphephe ukunyuka kwevolumu phakathi kwengoma kunye nengoma | Iindaba zeGajethi
ENgenye imini bendikuxelela indlela ekucaphukisa ngayo ukumamela umculo onesidlali seMP3 kwaye ngequbuliso xa utshintsha iingoma konyusa ivolumu kakhulu. Ukuba utshintsho luguquke kakhulu, lunokonakalisa neendlebe zethu kuba kukho abadlali abanakho ukuvelisa amandla amakhulu kwaye kuyo nayiphi na imeko akucebisi ukuba sibeke iindlebe zethu kwinqanaba elinje loxinzelelo lokuva.
TKananjalo kunokwenzeka ukuba urekhode iCD ngokudityaniswa komculo owuthandayo kwaye xa uyibeka epatini kufuneka ubekhona ngalo lonke ixesha ukunyusa okanye ukunciphisa umthamo kuxhomekeke kumxholo ovakalayo njengoko amandla okuphuma ayahluka. Oku, njengomzekelo odlulileyo we-MP3 player, kungenxa yokuba iifayile zomsindo (mp3) zirekhodwa kwimveliso eyahlukeneyo kwaye ke nganye nganye ivakala ngevolumu eyahlukileyo nokuba uyayitshintsha okanye hayi. umdlali.
PUkuze lo mahluko phakathi kwamandla ezivakala iingoma ezahlukeneyo ungaqhubeki ukukukhathaza, into ekufuneka uyenzile yile ukulungelelanisa isandi sayo yonke i-MP3. Ukulungisa isandi ngokulula kukubeka zonke iifayile kwinqanaba elifanayo lokukhutshwa kwaye ke zonke iingoma ziya kuvakala kwivolumu efanayo. Ngale ndlela akusafuneki ukuba unyuke okanye wehle umculo emva kwengoma nganye.
UInkqubo yasimahla yokwenza ii-MP3s ziqheleke MP3Gain Kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ungayifaka ngeSpanish. Ungayifunda ifayile ye- Incwadana yokufaka ye-MP3Gain endikupapasheyo ngenye imini apha VinagreAssino.com. Xa uyifakile singaqala ngale ncwadana incinci ukubeka wonke umculo wakho kwivolumu efanayo kwaye ulibale malunga nezo ziphazamiso zingathandekiyo. Khumbula ukuba i-MP3 isimahla kwaye akukho mfuneko yokuba uhlawule ngokukhuphela okanye ukuyisebenzisa, ngenxa yoko awunasizathu sokuba i-MP3 yakho iqhubeke nokudlala nganye nge ivolumu eyahlukileyo.
SSele ndiyifakile iMP3Gain kwaye uyibekile ngeSpanish Makhe sibone ukuba ungalungisa njani umsindo weengoma zakho.
1) Vula inkqubo, iwindow iya kuvela apho kufuneka ujonge kumacandelo amathathu aboniswe kumfanekiso olandelayo.
2) Amacandelo amabini angentla, «Yongeza iiFayile» kunye «Yongeza Ifowulda» sivumele ukuba songeze iifayile nganye nganye okanye songeze ifowulda epheleleyo ukumisa umsindo kuzo zonke iifayile ze-mp3 eziqulethwe kuyo. Enye indawo ebizwa ngokuba yi "Normal Volume Target" isivumela ukuba siguqule ubungakanani bokukhutshelwa kweeMP3. Okukhona i-decibel (dB) sibeka ngakumbi kwiingoma ziya kuvakala kamva. Inkqubo ibeka i "89,0 dB" ngokungagqibekanga kwaye ungalinyusa okanye ulinciphise eli nani ngokuthanda kwakho, kodwa ngaphambi kokuba wenze njalo, cinga ukuba xa unyusa eli nani liphezulu kakhulu kwaye unesiqhelo sokumamela umculo wakho kunye nevolumu yakho umdlali kuqhuma ngokupheleleyo, ungazonakalisa iindlebe zakho. Njengoko kuchaziwe kweli phepha malunga nokulahleka kwendlebe, iziphumo ezinobungozi zengxolo (ngokwembono yezomthetho) ziqala kwi-85 decibel (dB). Ke sukunyusa kakhulu eli nani, ngenxa yesifundo ndiza kulishiya ngexabiso elingagqibekanga «i-decibel ezingama-89» kodwa khumbula oko AKULUNGILE ukusebenzisa umdlali wakho ngevolumu epheleleyo.
3) Kule meko siza kubona indlela yokulungisa yonke imixholo kwifolda ngaxeshanye ukuze ucofe ku «Yongeza Ifolda». Iwindow ebizwa ngokuba "Khangela ifolda" iya kuvula apho kuya kufuneka ufumane indawo eneenkcukacha eziqulathe iifayile ofuna ukuziqhelelanisa. Xa uyifumene, cofa ku "Yamkela".
4) Ngoku uza kubona iifayile ze-mp3 ezikhethiweyo kwiWindowsGain window. Ukulungelelanisa isandi kufuneka siqale sihlalutye iithrekhi zomsindo esizongezileyo. Ukwenza njalo, cofa kwiqhosha "Hlaziya umkhondo" kwaye inkqubo yohlalutyo iya kuqala.
5) Xa inkqubo igqityiwe, iziphumo zohlalutyo ziya kuvela kwiscreen. Ukuba le ngoma ingaphantsi kwevolumu oyikhethileyo, inzuzo elungileyo iya kuvela kwaye ukuba ingaphezulu kwayo iya kuba mbi, kuyo nayiphi na imeko inkqubo iya kuphakamisa okanye yehlise ivolumu yeengoma zide zilingane (ziqheleke).
Ukuba ujonga emfanekisweni kukho imixholo emibini ene Bomvu "Y" phantsi kwekholamu "ikliphu (iTrack)" oku kubonisa ukuba ngenxa yokwanda kobunzulu beengoma ezithile eziza kusokola, ukugqwetha okuthile kunokwenzeka kwiindawo zengoma apho ivolumu ifikelela kubuninzi bayo. Ngokomgaqo, le ngxaki ayihlali ikhathaza kakhulu, kwaye amaxesha amaninzi ayiqwalaselwa, kodwa ukuba ukhetha, yehlisa inani kwibhokisi "yesiqhelo esijolise kwivolumu" kwaye uphinde uyihlalutye.
6) Xa ugqibile, cofa kwindawo ethi "Track Gain" kwaye zonke iingoma ziya kuguqulwa zibe kwivolumu enye.
Y ugqibile. Ukuba emva kokudlala iingoma ucinga ukuba isandi besibuthathaka kakhulu okanye singxole kakhulu, tshintsha ixabiso leziphumo ze-decibel kwaye ubuyele kumanqaku amane kwesi sifundo. Ndiyathemba ukuba ukusukela ngoku awuzukuphakuzela ukumamela umculo owuthandayo kwaye lumka ngeendlebe zakho, musa ukuwatyumza, bobomi bonke. Umbuliso omuncu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyifaka njani i-mp3s yakho ngevolumu efanayo kwaye uphephe ukunyuka kwevolumu phakathi kwengoma nengoma
Oku kuza kum nje! Ndinamacwecwe aliqela aphilayo omculo we-elektroniki owehla emoyeni onokusebenzisa ivolumu "eyenziweyo" !! ... Kwilixa elidlulileyo bendiphinde ndavuma iAdobe Audition, ndiyavuma ukuba Mkhulu, kodwa unzima kakhulu kum, khange ndibenomonde 🙁 Ndiyabulisa ngeviniga!
Molo Sappy_Girl, ndiyavuya ukukubona apha. Inyani yile yokuba iAdobe Audition ifana nokubulala iingcongconi ngemipu. Ukulinganisa iaudiyo ngeMP3 Ukuzuza unokwanela kwaye kukhululekile kwaye kulula. Umbuliso.
kuhle kakhulu enkosi, enkosi kakhulu
Uhambe ngaphezulu kwesi sifundo, kodwa nceda undixelele ukuba iingoma ziya phi nevolumu ehlengahlengisiweyo, okt kwifolda okanye kwifolda endiyilungisileyo igcinwa, okanye ukuba zilawulwa ngokuzenzekelayo ngaphakathi kwifolda yomthombo omnye.
Enkosi noxolo ngokungazi kukuba ndimtsha ndisebenzisa ezi zinto.
Iifayile ezifanayo ohlengahlengisiweyo, oko kukuthi, ii-mp3s zentsusa zilungisiwe kwaye zihlala kwifolda efanayo.
pablo cesar sitsho
Enkosi ngeporet, enkosi kakhulu
Igalelo elihle kakhulu kubalingane bakho, qhubeka njalo kwaye ilizwe liyakubulela ngonaphakade, imibuliso kubo bonke
Enkosi undincede kakhulu okanye mandincede ukubulisa kakhulu eTampico Tamaulipas Mexico
Ivan rojas castillo sitsho
Ewe, uyazazi ezinye iinkqubo zokwandisa ivolumu yee-mp3 zam? Ndine-mptrin kwaye mpgain ayikhanyisi.Ukuba uyazi ngakumbi ukulinganisa isandi se-mp3s, ndibhalele kwi-imeyile yam ******
ubunjineli kulawulo lweekhompyuter kunyaka wokuqala.
xao enkosi ngothando lwakho kwaye ubakhathalele xau.
la serena ngoJuni 2, 2008
U-Iván ufunde inqaku 2 lencwadi kwaye uza kubona ukuba ungawonyusa njani umthamo wee-mp3s zakho.
Enkosi ngoncedo lwakho, inyani yile yayiyingxaki engathandekiyo kwiindlebe.
Ndiyathandabuza, xa kuphuma lo "Y", iyakugqwethwa kuphela kwiingoma ezinesandi esiphantsi kwaye xa ziphakanyisiwe isiphene siza kubonakala, kodwa loo nto iyenzeka kwiingoma ezinomthamo ophezulu kwaye zincitshiswe zasiqhelo, kuya kubakho isiphako apho?
Ewe le «Y» iphuma phantsi kokucofa
enkosi kakhulu loko! Into endiyenzileyo kukunyusa ivolume yeengoma zam heh! Ndiyakuthanda ukumamela umculo ongxolayo, kodwa ndidikiwe, kodwa andimameli de iindlebe zam zibuhlungu! Enkosi ngayo yonke into
Enkosi kakhulu… bendifuna ukudibanisa iCD ebihlanganisiwe kodwa kuye kwafuneka ndihlele ingoma nganye kwaye bekungenakwenzeka… UBarbaro uza kum.
Nceda undixelele ukuba ungayonyusa njani ivolumu kwiingoma zam kwi-mp3 kwaye ungayenza njani simahla nangendlela endiyiqondayo
ukuba ayisebenzi njengokunye okucocekileyo
F UJavier sitsho
Ndiyabulela kakhulu kwesi sifundo, ndiyifundile indlela yokwenza oko ukulawula ivolumu, kuba ukuba iyacaphukisa ukuba ezinye iingoma zivakala ngevolumu kwaye ezinye zisezantsi okanye ngaphezulu.
Ndiphinda umbulelo wam !!!
NGOKUGQWESILEYO! … Iluncedo kakhulu.
Imibuliso evela eArgentina 😉
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ungayenza into enye ngeefayile ezitshangatshangiswayo, ndisebenza ngeengoma ezivela kwi-ipod yam, kodwa xa ndirekhoda ukugcina isandi esifanelekileyo, ndiye ndisehlise kumaza, njengoko sele ndinamkhondo amaninzi kumaza , kodwa oko bekusoloko kuyingxaki yam enkulu kwimithamo engafaniyo endifuna ukuyazi ukuba ngaba ikhona into enokubakho kulamaza enkosi kakhulu
Molo, inkqubo ebalaseleyo. Ndayidinga le nto ixesha elide kwaye ndayifumana.
Umbuzo omnye: Ngale MP3gain siphucula ivolumu, kodwa ndenza njani ngamatye? Ndiyaqonda ukuba okungakumbi ii-bitrate ine-mp3, kokukhona umgangatho wezandi ungcono. Ngaphaya koko ndikhuphele inkqubo ephucula i-bitrate, kodwa khange ndiyizame okwangoku, into embi kukuba luvavanyo lweentsuku ezili-15. Ngaba unayo inkqubo esebenza ngayo kwaye iyenza ngendlela enkulu nayo?
Ndilinde impendulo yakho enkosi….
UWalter uqaphele ukuba awukwazi ukuphucula i-bitrate (iqondo lokudlulisa) kwithebhulethi. I-bitrate inokuncitshiswa kuphela kodwa ingaphuculwa (inyuswe).
Kulungile, ukuba le nkqubo, ngoku ekugqibeleni andizukuhla kwaye ndinyuse ivolumu yeengoma zam endizithandayo, ubune-vinagrillo elungileyo… ukusuka eLima umbuliso… .. enkosi
Enkosi Vinegar ngoncedo lwakho. Qaphela ukuba ngenkqubo "yeWorkshop ye-Mp3" ndenze uhlengahlengiso kwezinye iingoma ze-mp3 kwaye "ndandisa" i-bitrate, kuba babene-128 kb kwaye ngoku xa bedlala zona i-192 kb iyavela (into endiyibekileyo). Ke ngokufumana Mp3 ndizolungisa ivolumu.
Andazi nyani ukuba oko kunyuka kwebitrate kuyawenza umahluko, kodwa kuyacaca ukuba zivakala ngcono ngalo lonke uhlengahlengiso olwenziwe. Enkosi kwakhona…
Diego dan sitsho
Inyani yile, inkqubo ipholile, kodwa bendifuna ukwazi ukuba ndingazikopa njani iingoma kwisidlali sam somculo okanye ndizikope kwiCD.
kukuba khange ndikwazi okanye ukuba kukho ifolda apho zonke izitshixo eziguqulweyo zihamba kakuhle kukungathandabuzeki kwam ukuba umntu unokuyiphendula imeyile yam ngu-xxxxx
Ndiyabenza baqheleke, ndilungelelanise ivolumu ngesandla kwaye ndibacoca kwiQhosha leSandi 9. Emva koko ndibasindisa kwi-mp3 320 kwaye ndisebenzise inzuzo ye-mp3.
UEdgar evans sitsho
Indoda endala endiyithandayo, evela eChile ndiyakuthumela imibuliso, le nkqubo yile bendiyifuna ukuba undigcinele iibhedi ezininzi ukusuka kwipatio yendlu yam ukuya kwigumbi lokuhlala, ewe bendizilolonga, kodwa ukutsiba ebendinako ngaphezulu ngebhasi ekhaya bezingekho ntle, enkosi kakhulu
aaaaaaaaah !!! kunye nekrisimesi emnandi !!!!!
UClaus Lau sitsho
Enkosi ngeviniga ngenkcazo.
Ndonwabe kakhulu kuyo yonke into.
Ngoku andisaziboni iinwele zam….
Ikrismesi emnandi, unyaka omtsha onwabile
Ngokwenene yinkqubo elungileyo kakhulu.
into endiyiyo, ndisebenza njengo-dj wabucala, kwaye yandinika iintlungu kancinci njengoko imixholo ethile yomculo yenza izithethi zajija, kwaye ngokusengqiqweni i-aviria enokwenzeka yesandi esihlanganisiweyo.
Ndikwathengisa ukudityaniswa kwe-mp3, kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye abathengi bayandivuyisana, kuba umculo wabo uvakala kamnandi ngalo lonke ixesha.
ezigqwesileyo zonke ...
Enkosi ndilahlekile kakhulu kunonina womntwana wayengazi ukuba bagcinwe phi
Intloko ebi sitsho
molo, kuyabonakala ukuba isebenza kuphela nge-mp3, kwaye kufuneka ndilungelelanise iaudiyo yeevidiyo ezininzi .. ndingayenza njani?
I-Badhead andinalwazi 🙁
UJoseto Márquez sitsho
Igalelo elihle, enkosi kakhulu
Ukugqibelela abakutshoyo, kodwa ndiyilandele imiyalelo yabo kwaye bendinengxaki encinci kwaye oko kukuthi malunga neepesenti ezingama-20 zeengoma zindixelela iMP · Zuza ukuba zinengxaki (impazamo ithi) kwaye ayilungisi ivolumu yazo , ke ndibasusile, kodwa ndiyaxolisa kakhulu kuba ndizisusile ezininzi endizithandayo. Ndingenza njani ukuze ndiqhelanise nazo kwaye kungafuneki ndizicime?
Iyamangalisa. Ndiyabulela kakhulu ngeminikelo efana nale, eyenza umculo ube mnandi kunokuba ungenabantu abafana nawe kwihlabathi liphela.
Enkosi kakhulu ngolwazi lwakho, ndiyalubulela uncedo lwakho.
UFran disco sitsho
Umqeqeshi ulunge kakhulu. Enkosi mhlobo wam.